Somaliland News - Madaxwaynae Riyaale oo ka qaybgalay munaasabada xuska sanad guurada 15aad ciidanka qalabkasida
Madaxwaynae Riyaale oo ka qaybgalay munaasabada xuska sanad guurada 15aad ciidanka qalabkasida
04 Feb, 2007 - Hargeisa - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland md. Daahir Rayaale kaahin, ayaa ka qayb-galay xafladii sanad guuradii 13-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii Ciidanka Qaranka Somaliland. Waxa kale oo munaasibadaas ka soo qayb-galay Saraakiisha Ciidanka Qaranka, Wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Golaha Wakiilada iyo kan Guurtida Jamhuuriyadda Somaliland.
Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin oo goobtaas munaasibadda ka hadlay, ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu ciidanka u wada xidho darajooyin sanad guuradan 13-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka Qaranka, taas oo ku tilmaamay inay dib u dhac ku keentay qabyo jirtaa.
Madaxweynuhu waxa uu intaas ku daray inay doonayaan xukuumad ahaan inay ciidanka markeliya Darajadad u wada xidhaan, imikana ay awoodi karayaan inay u xidhaan intii military-ga ka soo baxday oo keliya, balse aysan doonayn inay kala hadhaan.
Md. Daahir Rayaale Kaahin isaga oo arrintaas ka hadlaaya waxa uu yidhi �Maanta waxaan ugu jeclaa inaan halkan ka sheego inaan ciidanka derejada u wada xidho, laakin ishaa alaahi way dhicidoontaa, laakin qabyada inagu jirtaa ayaa dib inoo dhigtay, Aniga way iga go�an tahay oo waa iga go�aan oo sidaan u sheegayo waa iga go�aan, Haddii aan imika u xidho intii aan militeriga oo qudha ka soo saarnay ciidanka kalena wax derejo xidhan waxaan rabaa inay markaliya isla jaan qaadaan, dib u dhacaa dhacayna intaas ayuu ku jiraa sidaad u samreyseen awalba u samra�
Madaxweynuhu waxa uu hambalyo u diray dhamaan saraakiisha Qaranka, Saraakiil xigeenada, askarta iyo Xaasaskooda, waxaana uu yidhi isaga oo Hambalyadaas diraaya �Waxaan aaminsanay inay maanta tahay maalin qiimo weyn ugu fadhida umada reer Somaliland, oo ah maalintii la asaasay ciidan umadu wada leedahay, run ahantii qaran ma jiri karo mana muuqan karo haddanu lahayn cudud ciidan oo heegan u ah inay himilada umada difaacdo.Waxaanan marka u horeysa hanbalyo u diraya dhamaan ciidanka qaranka, saraakiishooda, saraakiil xigeenada, askarta iyo xaasaskooda meelkasta oo ay joogaan, waxaanan leeyahay ilaahay ha u naxariisto intii u halgantay dalkan iyo inta ka danbeysa oo iyagoo dalka difaacayaa wax ku noqday ee ciidamada qaranka ka mida� Source: Somaliland Future